4 qof oo ku dhaawacantay qarax ka dhacay Boosaaso & ciidanka oo baaritaanka ka wada halkii ay wax ka dhaceen. – Radio Daljir
Janaayo 27, 2010 12:00 b 0
Bosaso, Jan 28 ? Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay qarax miino oo goordhweyd ka dhacay magaalada Boosaaso gaar ahaan xaafadda Suweyto, ee kulaasha dhinaca xeebta ee bariga magaalada.
Qaraxaan oo sida la sheegay ahaa miino waddo dhinaceed lagu aasay isla markaana ahayd nooca ramuudka lagu hago, ayaa lala eegtay gaari ay leeyihiin ciidamada Sirdoonka Puntland ee PIS oo xilligaasi marayey waddada.
Labo ka mid ah askartii saarnayd gaarigaasi iyo sidoo kalana labo qof oo shacab ah oo marayey waddada dhinaceeda ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi miino, kuwaasi oo loola cararay cisbitaalka sida ay soo sheegayaan wariyaasha idaacadda Daljir ee magaalada Boosaaso.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa isku gadaamay goobtii ay wax ka dhaceen iyagoo halkaasi ka bilaabay baaritaanno ku saabsan sidii wax u dhaceen iyo ciddii ka danbaysay falkaasi weerer.
Illaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay weerarkaasi, hase ahaatee saraakiisha ammaanka ee magaalada Boosaaso oo idaacadda Daljir ay wax ka weydiisay sida wax u dhaceen iyo wax bileyska u qabsoomay ayaa ku gaabsaday goordhaw in ay warbaahinta u sheegi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaankooda.
Wixii warar ah ee arrintaas ka soo kordha halkaan ayaan idinku soo gudbin doonnaa inshaa allaah.